Ningbo, Hangzhou, umongameli elinesibini Chamber of Commerce wabamba intlanganiso umsebenzi - China Yuyao Hengwei Hose ngocingo
Ningbo, Hangzhou, umongameli elinesibini Chamber of Commerce wabamba intlanganiso yomsebenzi
At 16:00 ngoMeyi 6, 2014, Ningbo, Hangzhou, umongameli elinesibini Chamber of Commerce intlanganiso ofisi ebibanjelwe Ningbo Investment Co., Ltd. Lan House, baza iTelephoto Ming, vice mongameli Feng Wei, UXie Guorong, Dongxu Ming , Bao Shili, iBhodi Iisuphavayiza Shenpei Rong, uNobhala-Jikelele uJiang Lan inxaxheba.
(Coke usihlalo kunye ingqalelo ngononophelo ulwazi nxaxheba kwintlanganiso)
Umhlangano usihlalo wayo batshintshana umongameli inyanga ka Dong Xuming, Dongxu Ming, uSekela Mongameli kuphuhliso lwembumba ishishini ingenisiwe, umgangatho Lan Investment Co., Ltd. ke lutyalo-real estate yorhwebo zobungcali iinkampani utyalo-mali, iindawo zotyalo ziquka market yobungcali, ezidolophini izakhiwo, iihotele, amagumbi, ukhenketho, indawo kunye nezinye iifomathi olona phuhliso estate kunye nemisebenzi. iintlobo ezithile utyalo-mali, kuquka owned, joint venture, ukubamba, ukulingana kunye notyalo abuyele ezisisigxina. Bai Lan International Jewelry Lake City ngokusekelwe ngosuku lomtshato square, intshayelelo amalungu ezingundoqo malunga 20 Hong Kong Jewelry Abavelisi ', njengoko senziwe Hong Kong ukungena nezwe izacholo ukubonisa, intengiso ye window kunye nokuhlanganiswa brand ngamazwe kunye zasekhaya iziyolo umgca izacholo malunga 10 iyonke izinziswe.
UNobhala Jikelele weZizwe eziManyeneyo uJiang Lan isishwankathelo umsebenzi wenziwe ngo-Apreli nangoMeyi nesicwangciso somsebenzi. Ukomeleza iiyunithi ilungu amakhonkco unxibelelwano, ukukhuthaza intsebenziswano kwezoqoqosho nokutshintshiselana phakathi neenkampani ezingamalungu, ishishini kuqinise uphuhliso nkqi, amalungiselelo mbutho ngoMeyi kuqala "neenkampani ezingamalungu ukukhuthaza uphuhliso kunaniselwano" imisebenzi, abathathi-nxaxheba ukuba umongameli we the inani lemisitho, luhlola, ezifana nokuphuhlisa indlela shishino kwaxoxwa.
(UNobhala-Jikelele uJiang Lan isishwankathelo umsebenzi wenziwe ngo-Apreli nangoMeyi Plan Work)
Kwintlanganiso, i Chamber of Commerce ukuze sikwazi imisebenzi wesisa ukuba baphonononge, Dongxu Ming, usihlalo Umnikelo Charity Fund $ 10,000. Ke uphando malunga nendlela yokutsala abenzi elite e Ningbo Hangzhou.
Ekugqibeleni, Coke, umongameli we-Aprili 19, ngaphezu kuthotho lwemisebenzi ukuvavanya 姚大岚 edolophini, ukulungiselela imisebenzi ukubalaselisa ukhuseleko elizayo kuqala. Usekela mongameli zonke ukuvakalisa iimbono zabo, unyaka emva kokuba kucetywa ukuba alungiselele imbuyekezo Hangzhou ezithathwa ekhaya.